iOS 9 dia ahafahanao mitahiry fametahana mailaka ao amin'ny iCloud | Vaovao IPhone
Tsy mitsahatra miresaka momba ireo fiasa vaovao amin'ny iOS 9 izahay, fa io no manohina azy, angamba rehefa tonga amin'ny endrika fanavaozana ofisialy amin'ny fararano dia toa ianao no nametraka azy io tamin'ny fiainanao manontolo. Androany dia hiresaka fampiasa vaovao ao amin'ny iOS 9 isika, ary izany dia mamela antsika hitahiry ireo miraiki-po azo avy amin'ny alàlan'ny mailaka mivantana ao amin'ny iCloud, izay ankoatry ny serivisy an'ny antoko fahatelo izay navela teo aloha.
Ahoana ny fomba hitehirizana ireo miraikitra amin'ny mailaka ao amin'ny iCloud Drive (takiana amin'ny iOS 9)
Manaova fanindriana lava amin'ny fametahana
Anisan'ireo sary masina, kitiho ny "Save File", hisokatra ny iCloud Drive.
Raha te hampiasa serivisy hafa ianao, toa ny Google Drive, tsindrio ny bokotra eo amin'ny zoro ankavia ambony ary hisokatra ny menio manodidina anao hamonjy. Na izany aza, na dia miseho aza ireo sary masina, tsy misy na dia iray aza hiasa, dia hanome lesoka izy ireo, noho izany dia tsy maintsy miandry mandra-pahatongan'ny fanavaozana azy ireo vao ho lasa mifanaraka amin'ny iOS 9 isika.
Safidio ny fampirimana tianao hitahiry ilay rakitra.
Na izany aza, ny iOS 9 dia mbola ao anatin'ny dingana beta aloha loatra hanaovana ireo fiasa ireo ho fitaovana iraisana, ary tsy dia nahomby firy izy io. Fa ny zava-dehibe dia eo izy, ary mandritra ny betas vaovao dia ho hitantsika ny fomba anazavana azy ireo sy hanamorana ny fiainantsika.
Tsy io irery no rindranasa tsy nahomby ary be dia be tao amin'ny iOS 9, ary ny Outlook ohatra dia tsy mamela ny hifamadika amin'ireo kaonty samihafa satria manjavona ara-bakiteny ilay bokotra, na Mikatona ara-bakiteny ny telegram rehefa manoratra tarehintsoratra maromaro ianao, izay vitsy dia vitsy. Manantena izahay fa amin'ny herinandro ho avy na farany, ny Apple dia handefa ny beta faharoa an'ny iOS 9, manadio bibikely sasany ary manasa ireo mpamorona hampifanaraka ny fampiharana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iOS 9 dia ahafahanao mitahiry ny fampifandraisana mailaka ao amin'ny iCloud
Sintomy ny rindrambaiko iOS 9